အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်၏ဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်သူသည်သာမန်ထက် ပို၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်မဖြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်ထိရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်သူဟာ Ankara ကိုသွားပြီး Ankara ကလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ တက်ရောက်လာသူများစွာနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်များကိုခွင့်မပြုကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမယုံသောသူများပင်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည်တာဝန်ရှိသည်လားဟုမေးမြန်းခဲ့သည်။ တရား ၀ င်အကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။ ဘုတ်အဖွဲ့၏အစီရင်ခံစာကိုတောင်မှဖတ်။ မရခဲ့ပါ၊ ဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ဤထောင်ချောက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့နေကြသည်။ ။
သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းအဘို့ငါမပြောကြဘူးအတော်လေးသဘာဝ။ သင်နေမကောင်းလျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲ။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်, သင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အဖြစ်စဉ်ကိုအခုအချိန်မှာကောင်းစွာတိုးတက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမလုပ်ရပ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှငါကကြိုက်တယ်။ ငါပြင်ပကနေကြည့်ရှုသောအခါဤသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်ပုံရသည်။ ငါတိုက်ခိုက်ရန်အနေအထား၌မဖြစ်ကြောင်းကိုမဟုတ်သလိုငါနိုင်ငံရေးထဲသို့ဝင်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်သလိုစီးပွားဖြစ်ကအကဲဖြတ်ရန်အခွအေနေရှိသည်မဟုတ်။ ငါနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်၏။ ငါ့အလုပ်အကိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ငါစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သမျှ။ ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်ဆရာဝန်များကိုကြည့်ရှုပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအတိတ်ကာလမှလွတ်မြောက်စေခြင်းမှထွက်ခွာသွားစေလိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနောက်တွင်ရှိနေသည်။ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် Mustafa Cengiz “သူတို့အားလုံးဟာတန်ဖိုးရှိလှတဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့အားလုံးဟာဂလာတာဆာရာမှလာကြတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်ချင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ဖက်ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ပြတယ်။ ငါတို့နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နေသည်ဟုထင်သောအပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ရှားမည်မဟုတ်ပါ။ အတူတူယှဉ်ပြိုင်ကြပါစို့။ Er Square ကိုဖွင့်လှစ်နေတယ် “ အသုံးပြုထားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ။
BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
6 Comments on RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
NURETTİN December 9, 2020 at 4:30 pm
PINAR December 10, 2020 at 11:00 am
BURAK December 11, 2020 at 10:30 pm
MEHMET December 12, 2020 at 1:40 am
ÖZGÜR December 13, 2020 at 4:30 am
restbet canlı izle sağlam site arıyorum tavsiyeleriniz neler
SüPeR_BaBy December 14, 2020 at 9:40 pm